Ndị na-emepụta ngwaahịa, ndị na-ebubata ngwaahịa - Ụlọ ọrụ ngwaahịa China
UMEV01 na UMEV02 bụ ngalaba nlekota na njikwa nwere ihuenyo mmetụ agba LCD, nwere interface mmekọrịta enyi na enyi, emebere ya maka chaja EV.Ọ na-ekwurịta okwu na BMS, ma na-achịkwa modul chaja iji mezue usoro nchaji, yana Ọ nwere ọrụ dị iche iche dị ka ịgba ụgwọ, ịgụ kaadị, ịkparịta ụka n'Ịntanet, ndekọ data, njikwa anya, mkpu mmejọ na ajụjụ.
Igwe nlebanya nleba anya nke umev04 nwere ihuenyo mmetụ agba LCD ma nwee interface mmekọrịta mmadụ na kọmpụta ahaziri iche.Emebere ya nke ọma maka ọkọlọtọ European na ọkọlọtọ Japanese nke ịchaji ụgbọ ala eletrik.Ọ na-akwado CCS + CHAdeMO + AC, CCS + GB / T + AC, CCS + CHAdeMO + GB / T, wdg.
UR100030-SW(B) EV modul chaja emepụtara pụrụ iche maka chaja EV DC.Ọ nwere oke voltaji nke mmepụta ike mgbe niile.Ọzọkwa ọ nwere nnukwu ike ihe, elu arụmọrụ, elu ike njupụta, elu ntụkwasị obi, ọgụgụ isi akara na mara mma ọdịdị uru.Usoro njikwa dijitalụ na-ekpo ọkụ na nke nwere ọgụgụ isi na-arụkọ ọrụ ọnụ iji gbochie ọdịda ma hụ na ntụkwasị obi dị elu.
UR50040-W EV chaja rectifier bụ nke emepụtara pụrụ iche maka chaja EV DC.Ọ na-anya isi uru nke mgbazi ihe ike dị elu, arụmọrụ dị elu, njupụta ike dị elu, ntụkwasị obi dị elu, njikwa ọgụgụ isi, ọdịdị mara mma na obere ebe obibi.Elu ntụkwasị obi ngwaike imewe na ọgụgụ isi dijitalụ akara usoro na-arụkọ ọrụ ọnụ iji amụma gbochie ọdịda na hụ na elu ntụkwasị obi.
UR100040-SW EV modul chaja emebere nke ọma maka chaja EV DC.Ọ nwere oke voltaji nke mmepụta ike mgbe niile.Ọzọkwa ọ nwere nnukwu ike ihe, elu arụmọrụ, elu ike njupụta, elu ntụkwasị obi, ọgụgụ isi akara na mara mma ọdịdị mma.Usoro njikwa dijitalụ na-ekpo ọkụ na nke nwere ọgụgụ isi na-arụkọ ọrụ ọnụ iji gbochie ọdịda ma hụ na ntụkwasị obi dị elu.